लोकसेवाको तयारी कसरी गर्ने ? यस्तो छ तुलसीरामको आई क्यू टिप्स (टिप्स सहित) - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
लोकसेवाको तयारी कसरी गर्ने ? यस्तो छ तुलसीरामको आई क्यू टिप्स (टिप्स सहित)
काठमाडौं । नेपालमा सरकारी जागिरको आकर्षण बढ्दो छ । लोकसेवाले कुनै पनि पदको लागि विज्ञापन निकाल्दा माग भन्दा सयौ गुणा बढी आवेदन पर्ने गरेको छ । कुनै पदको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता एसएलसी हुँदा पनि त्यसमा स्नातककोत्तर डिग्री भएकाले समेत आवेदन दिएको पाइन्छ । लोक सेवामा फारम भर्ने, दस्तुर बुझाउने भीडले पनि सरकारी जागिरमा ठुलो आकर्षण रहेको देखाऊछ । तर लोकसेवाको कसरी तयारी गर्ने, कसरी पढ्ने सन्दर्भमा आवेदकहरुसंग पर्याप्त ज्ञान नहुँदा धेरैले सफलता पाउन भने सक्दैनन् ।
हामीले यसमा हामी लोक सेवा पार गरेर सरकारी सेवामा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरुको विचार पस्कने छौ । हाम्रो एक मात्र उदेश्य भनेको लोक सेवा तयारी गरिरहेकाहरुलाई सहयोग गर्नु हो । लोकसेवा पढ्ने विद्यार्थीका लागि अहिले बजारमा आईक्यूका नयाँ नयाँ टिप्सहरु सहित तहल्का पिट्दै एकजना शिक्षक देखा परेका छन । तुल्सीराम ढकाल अहीले युटुव च्यानल सहित बजारमा देखीएका हुन । उनले आफ्नो च्यानलमा सामान्य ज्ञान र आईक्यू सम्बन्धी पढाएकै भिडीयो राखेर लोकसेवाका विद्यार्थीलाई सहयोग गरीरहेका छन । विभिन्न संस्थामा आबद्ध भएर लोकसेवा कक्षा समेत पढाउँदै आएका उनले दिएको आईक्यू टिप्सले तहल्का पिटेको छ ।
यसरी सुरू गरे लोकसेवालाई तयारी कक्षा
​केही समय पहिले तुलसीराम ढकाल आफ्नो कामको सिलसिलामा पाल्पा पुगेका रहेछन् । पाल्पा गएर एउटा चिया पसलमा बसीरहेका उनले दुई महिलाले आपसमा कुराकानी गरेको सुनेछन् । महिलाहरुको लोकसेवा पढ्ने इच्छा तर क्लास लिन समय नहुने पैसा पनि नहुने । उनलाई लाग्यो, घरमै बसीबसी लोकसेवा पढ्न सकिने कुनै प्रविधि ल्याउन सके कत्ति सजिलो हुन्थ्यो होला ।
उनकी श्रीमतीले उनलाई आइक्यूका केहि प्रश्नहरु सोध्ने गर्थिन् । उनी त्यसको उत्तर तत्काल दिने गर्थे । यसैक्रममा उनलाई श्रीमतीले नै काम गर्न प्रेरीत गरीन् । उनी भन्ने गर्थिन्, ‘तपाईसँग यति धेरै क्षमता छ तर आफ्नो क्षमता हुँदा पनि किन काम गर्नुहुन्न । श्रीमतीबाट धेरै हौसला प्राप्त भएपछि उनले अनलाइनमार्फत् आइक्यूका कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने विचार गरे । श्रीमतीको हौसलाको कारण नै उनी यस कार्य गर्न सुरु गरेको बताउँछन् ।
यसका साथै उनका सहकर्मी सुरेश सिवाकोटीबाट पनि धेरै हौसला प्राप्त भएको उनी बताउँछन् । उनीसँग क्षमता भएकाले उनले काम गर्न सक्ने भन्दै उनी पनि ढकाललाई बारम्बार प्रेरित गरीरहन्थे । यसैक्रममा उनले काम गर्ने निधो गरे । पहिलो भिडियो उनले ७३ सालको पुस १५ मा २ मिनेटको भिडियो राखेका थिए । उनी आफ्नो कोठामा भएको बोर्डमा आफै आइक्यूका प्रश्नको समाधान गर्छन् । नजिकै स्ट्याण्डमा मोबाइल राखि भिडियो खिच्छन् । अनी सुरु गर्छन् आफ्नो काम । पछि त्यहि भिडियोलाई आफैले सम्पादन गरेर युटुबमा अपलोड गर्छन् । उनलाई कोहि सहयोगी चाहिँदैन सबै काम आफै पुरा गर्छन् ।
सुरुमा ३०–४० भिडियो निर्माण गर्नको लागी भने उनलाई श्रीमतीले सहयोग गरेकी थिइन् । श्रीमतीले भिडियो खिच्थिन्, आफु आइक्यूका प्रश्न समाधान गर्नतर्फ लाग्थे । तर पछि उनी स्ट्याण्डको सहयोगमा सबै कार्य आफै गर्न लागे । सबै लोकसेवा पढ्न चाहाने विद्यार्थी क्लास जान नसक्न सक्छ । पैसाको अभाव, अनी समयको अभावको कारणले गर्दा लोकसेवा पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि पछुताएकालाई इच्छा मार्नुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थी क्लाससम्म गएतापनि शिक्षकले पढाएको नबुझिन सक्छ । एकपटक पढेको कुरा झुल्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा आफुले बनाएको भिडियोले विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने उनको दाबी छ ।
‘घरमै बसेर आइक्यू सिक्न सकिने, न त पैसाको खर्च नत समयको खर्च, एकपटक नबुझे वा झुलेमा फेरी हेर्न सकिने यस प्रविधिले धेरैलाई सहयोग गर्छ’, उनी भन्छन्, ‘घरमा काम गर्दै पनि केहि कुरा सिक्न सकिन्छ ।’ गाउँमा बसेर शहरसम्म पढ्न जान नपाउने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी भिडियो निर्माण गरेको उनी बताउँछन् । आफुले निर्माण गरेका भिडियोहरु सरल खालको, गाहृो प्रश्नको पनि सजिलो र छोटो तरीकाले समाधान गरीएको उनको दाबी छ । एउटै च्यानलबाट धेरै कुराको ज्ञान पाउन सकिने उनी बताउँछन् ।
यस्ता छन् उनका भिडियोहरू:
4,983 total views, 30 views today
काठमाडौँ । दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमको डडेल्धुराबाट कांग्रेस सभापति एवं […]
एमाले-माओवादी ५५ बर्षपछि सगोलमा : टुटफुटको शृंखलामा टिक्ला एकता ?
असोज १९, काठमाडौँ । जुट्नभन्दा बढी फुट्न जानेका वामपन्थीमध्ये ठूला दलले एउटै कम्युनिस्ट केन्द्रका लागि […]
लण्डनको भूमिगत रेलमा विस्फोट, प्रहरीको अनुसन्धान जारी
भदाै ३० । दक्षिण–पश्चिमी लण्डनको पार्सन्स ग्रिन अन्डरग्राउन्ड रेलमा विस्फोट भएपछि प्रहरीले […]